कक्षामा कार्ल मार्क्स- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
कक्षामा कार्ल मार्क्स
वैशाख २८, २०७६ नारायणी देवकोटा
फोटो देखेको तीन वर्षपछि बीबीएस पढ्न थालेपछि सुरु भएको नेपालको जनआन्दोलन भाग दुईका क्रममा उनका बारेमा धेरै कुरा सुन्न पाइयो  ।
फोटो देखेको तीन वर्षपछि बीबीएस पढ्न थालेपछि सुरु भएको नेपालको जनआन्दोलन भाग दुईका क्रममा उनका बारेमा धेरै कुरा सुन्न पाइयो । गरिबलाई मुक्तिको सपना देखाउने स्वप्नद्रष्टाको रूपमा ।
म व्यवस्थापनको विद्यार्थी भए पनि राजनीति र समाजबारे रुचि थियो । हाम्रा गुरु घनश्याम भुसाललाई एक–दुई पटक भेटेपछि मैले ‘के पढ्ने ?’ भनेर सोधेकी थिएँ । उहाँले सिफारिस गरेको पहिलो किताब थियो, ‘कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र’ । बागबजारको प्रगति पुस्तक पसलमा उक्त सानो किताब किनेर पढे पनि मैले छेउ–पुच्छर के भनेको हो भन्नेबारेमा बुझ्न सकिनँ ।
मैले टुकुचामा रहेको नेपाल अध्ययन केन्द्रछेउको चियापसलमा पढन्तेहरूको भीडमा नबुझेको कुरा भनेपछि कसैले भनेका थिए, ‘मैले बीसौँ पटक पढेँ होला, पटकपटक फरक अर्थमा बुझ्छु ।’ उनका कुराले मलाई हरेक पाठलाई मान्छेले आफ्नो ज्ञानको दायरामा बुझ्ने रहेछ भन्ने स्वीकार गर्न सघाएको थियो ।
आफूलाई चासो लाग्दै गएपछि बागबजारका कैयौँ पुस्तक पसलमा ती दाह्रीवाला बूढो मान्छेका फोटोसहितका झुन्डिरहेका किताब र पत्रिकामा आँखा पुग्थे । पैसा हुँदा म किनेर लैजान्थें । पार्टीका कार्यक्रममा तिनैको फोटोसहितको ब्यानरमा आँखा पुग्थे अनि मलाई ‘त्यही दाह्री बूढालाई यति धेरै किन मानेका होलान् ?’ भन्ने लाग्थ्यो । व्यवस्थापनको पढाइ र कामको चापबाट बचेको समय म गातामा मार्क्सको फोटो राखेका किताबभित्र पस्थेँ तर धेरै कुरामा मार्क्सले नै भनेको लेखेका कुरा कम पाउँथें, अरू नै मानिसले गरेका व्याख्या बढी हुन्थे ।
मानिसका गफ सुन्थें । चिया गफमा, पार्टीले आयोजना गरेका कार्यक्रमका भाषणमा, श्रमिक महिला दिवसको दिन कोही भन्थे, ‘मार्क्सले श्रम नगर्ने महिलाहरू हाम्रा आमा, दिदीबहिनी भए पनि बेश्या हुन् भन्नुभएको छ ।’ श्रम भनेको नै के हो भन्नेबारेमा र आफ्नै घरभित्रको श्रमको मूल्यांकन गर्ने प्रणाली नेपालमा र धेरै देशमा अहिले पनि छैन । महिलाले घरभित्र गर्ने श्रमलाई नहेरी महिलामाथि थोपरिएको सांस्कृतिक बन्धन र त्यसको यौनिकतासँग जोडेर मार्क्सले भनेका भनेर गरिएको परिभाषा सुनेर दिक्क लाग्थ्यो ।
काठमाडौंमा पाइने किताब र चिया गफहरूमा ‘संसारमा धनी र गरिब दुई वर्ग हुन्छ, धनीले सधैँ गरिबमाथि शोषण गर्छ, शोषणका कारण गरिबहरू मिल्छन् र धनीको सत्ता पल्टाउँछन् । धनी सधैँ धनी भइरहन्छ, गरिब सधैँ गरिब नै भइरहन्छ,’ भन्ने कुरा बुझ्थेँ । धनी सधै धनी र गरिब सधैं गरिब हुन्छ भन्ने मानिसहरू नै फेरि भनिरहेका हुन्थे, ‘सांसद हुँदा चप्पल लगाएर सिंहदरबार छिरेको फलानाले यत्ति सम्पत्ति जोड्यो । फलानो कम्युनिस्ट होइन, फलानोले आफूलाई कम्युनिस्ट भन्छ तर सप्ताहको आयोजना गर्छ’ वा ‘माधव नेपालले आफ्नी आमाको किरिया गरेनन् तर राजालाई दाम चढाए’ ।
पत्रपत्रिकामा लेखिने कुरा पनि यीभन्दा फरक हुँदैनथे । धेरै कुरा चित्त बुझ्दैन्थ्यो, धेरै कुरा फुकाउनै नसक्ने गरी जेलिएका जस्ता लाग्थे अनि म घनश्याम दाइलाई सोधिरहन्थेँ । यही सोधाइको क्रमहरूमा घनश्याम दाइले ‘तपाईंको रुचि र पढाइ मिलिरहेको छैन, समाजशास्त्र पढ्नुहुन्छ कि,’ भनेर भनिरहनुहुन्थ्यो ।
त्रिविमा समाजशास्त्रमा एमए भर्ना भएपछि मार्क्सवादभन्दा अगाडि हामीले समाजशास्त्र के हो र कसरी समाजशास्त्रीय रूपमा हरेक कुरालाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने भन्ने सिक्यौं । समाजशास्त्रले हरेक घटना, विचार वा सिद्धान्तलाई घटना हुने समाज र समयको फ्रेममा राखेर अध्ययन र व्याख्या गरिनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । पढ्दै गएपछि लाग्दै गयो मार्क्सले धेरै कुरामा हात हालेछन्, इतिहास, अर्थतन्त्र, समाज र दर्शन ।
र तिनलाई पहिलाका इतिहासकार, अर्थशास्त्री, समाज विज्ञ र दार्शनिकले भन्दा फरक ढंगले व्याख्या गरेछन् । इतिहास भन्ने कुरा राजामहाराजाको वंशावली हो भन्ने बुझाइलाई इतिहास मान्छेका दिन दिन क्रियाकलापले बनाउँछन् भन्ने कुरा उनले बुझाउने गरी लेखेछन् । आर्थिक आधारमा समाजमा भइरहेको विभाजन र दमनलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ र त्यो परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरामा जोड दिएछन्, जुन कुराले संसारभरिका मान्छे मानव जीवनमा भइरहेका दुःखको महासागर अलिकति प्रयास गरे तर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान दिएछन् ।
कार्ल मार्क्सले दिएको त्यही ज्ञानलाई संसारभर आफूलाई मार्क्सवादी भन्नेहरूले आफ्नै ज्ञानको दायरा, रुचि, क्षमता, आफूले भोगेको समाज र व्यक्त गर्न सकिने आफ्नो अवस्थाअनुसार व्याख्या गरिरहेका छन् । यसरी व्याख्या गर्ने विषय मानवमाथिको शोषणको आधार केलाउने र शोषणको अन्त्यका उपाय खोज्नै नै धेरैको चासोको विषय हो ।
यही क्रममा रुसका नेता लेनिनले सन् १९१७ मा मजदुरको नाममा एकदलीय शासनको स्थापना गरे । गरिबको सत्ता यसरी स्थान हुन्छ भनेर उदाहरण देखाउने प्रयास गरे । गरिबको पनि राज्य हुन्छ भन्ने त्यो एक आदर्शले बीसौं शताब्दीभरि धेरै मानिसको मनमा राज गर्‍यो । लेनिनकै समयमा रोजा लक्जेम्बर्गले ‘एउटा मात्रै दलको उपस्थितिले गरेको क्रान्ति दिगो हुन्न’ भनेर व्याख्या गरिन् ।
लेनिनको मृत्युपछि रुसको सत्तामा आएका कम्युनिस्ट पार्टीका नेता भित्रभित्रै तानाशाहमा परिवर्तन हुँदै गए । गरिबहरूको सपना र व्याख्याको एउटा आधारस्तम्भ समयक्रममा आफैँ ढल्यो । अहिले पनि संसारभर समतामूलक समाज निर्माणका लागि एकदलीय शासन उचित कि प्रतिस्पर्धामा आधारित बहुदलीय शासन उचित भन्ने दुई धार देखिन्छ ।
समाजमा भएको शोषणको आधारको बारेमा पनि संसारभरका मार्क्सवादीहरूले आफ्नो आफ्नो स्थानअनुसार व्याख्या गरेका छन् । यसरी गरिने व्याख्यामा मानवमाथिको शोषणको अधार आर्थिक नै हो भन्ने धार अहिले पनि बलियो छ । तर, व्यक्तिमाथि हुने शोषण र एउटा समाज, समुदाय र देशबीच हुने शोषणको बारेमा भने फरक फरक व्याख्या छन् ।
व्यक्तिमाथि हुने शोषणको कुरामा निकोलास पाउलान्तासले व्याख्या गर्छन् । किन कुनै देश गरिब र कुनै देश धनी हुन्छ ? किन कुनै ठाउँ विकासमा पछाडि परेको हुन्छ किन कुनै ठाउँ अगाडि हुन्छ भन्ने विषयमा नवमार्क्सवादीहरूले पर्याप्त व्याख्या गरेका छन् । यसरी व्याख्या गर्नेमा इमानुअल वालेस्टाइन, आन्द्रे गुन्डर फ्रेंक अगाडि छन् । उनीहरूको व्याख्या एकै विषयलाई लिएर गरिएको भए पनि व्याख्या गर्ने तरिकाहरू फरक छन् ।
समाजमा रहेको शोषणको आधार आर्थिक भए पनि कसरी शोषण गरिन्छ भन्नेबारेमा इटलीको जेलमा बसेर एन्तोनियो ग्राम्सीले आधा बुझिने आधा नबुझिने गरी शोषणको आधार आर्थिक पनि हो तर प्रभुत्व लादेर शोषण गरिन्छ भनेर व्याख्या गरे ।
ग्राम्सी हेजेमोनी र पुँजीको व्याख्या जर्मनीकै सामाजिक व्याख्याता माक्स बेबर, पियरे बोर्दियु हुँदै मार्क्सवादीहरूको एउटा हाँगो जर्मनीको फ्रेंकफर्ट स्कुल र त्यसका पछिल्ला दार्शनिक जर्जन ह्याबर्मासले पुँजी पैसा मात्रै नभई सामाजिक, सांस्कृतिक र सांकेतिक (सिम्बोलिक) पनि हुन्छ भन्ने कुरालाई तथ्यसहित बताएका छन् ।
समाज र मानिसहरूको सम्बन्ध तथा परिवर्तनबारे पनि ठाउँअनुसार फरक व्याख्या छन् । समाजशास्त्र पढ्दै जाँदा रुसमा लेनिन र उनका उत्तराधिकारीले व्याख्या गरेको मार्क्सवाद, रोजा युरो कम्युनिज्मले व्याख्या गरेको मार्क्सवाद, हिटलरले सातो खाएका मार्क्सवादीहरूले स्थापना गरेका फ्रेङ्कफ्रर्ट स्कुल र त्यसका अहिलेका हस्ती जर्जेन हावरमासले विकास गरेको आलोचनात्मक सिद्धान्तले व्याख्या गरेको मार्क्सवादको व्याख्या, इटालिमा मुसोलिनीले जेलमा सडाएर मारिएका ग्राम्सीले विकास गरेको हेजेमोनी सिद्धान्त, मार्क्सवादको नामै नलिइने अमेरिकी समाजशास्त्रीय अध्ययनमा लुइस कोजरहरूले व्याख्या गरेको द्वन्द्वात्मक प्रकार्यवाद, फ्रान्सका मार्क्सवादी निकोस पाउलान्तासले विकास गरेको पावर ब्लकका सिद्धान्तहरू आउनुका पछाडिका पाटाहरूलाई नबुझी मार्क्सवादलाई बुझ्न गाह्रो रहेछ भन्ने लाग्छ ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हामीले कार्ल मार्क्सभन्दा बढी लेनिन र माओ पढेका हौं भनेर हाम्रा गुरुहरू चैतन्य मिश्र र घनश्याम भुसालले भनेपछि धेरै भन्नै परेन । अहिले समाजशास्त्रको एमफिलको कक्षामा हामीले पढ्ने धेरै लेखमा कहीँ न कहीँ कार्ल मार्क्सको नाम जोडिएर आउँछ । अनि हामी कुरा गर्छौँ किन जर्मनीकै मान्छेले समाजलाई फरक ढंगले व्याख्या गर्‍यो ? किन कानुन पढिरहेको वा पत्रिका चलाइरहेका संसारका अरू मान्छेले समाजलाई त्यसरी व्याख्या गर्न सकेनन् जसरी कार्ल मार्क्सले व्याख्या गरे ? अथवा कार्ल मार्क्सको जीवनमा एंगेल्स साथी बनेर र जेनी श्रीमती बनेर नआएको भए उनले त्यही तहको योगदान दिन्थे कि दिन्थेनन् होला ?
फेरि पनि समाजशास्त्री भएर हरेक कुरालाई बुझ्ने र व्याख्या गर्ने मानिसको क्षमता मानिसभित्रको रुचि, उसले हासिल गरेको ज्ञानको दायरा, उसले पाउने सहयोग र वातावरण नै मुख्य भन्दाभन्दै पनि लागिरहन्छ यत्ति धेरै मानिसलाई सोच्न र परिवर्तनका लागि ज्यान दिने गरी प्रतिबद्ध बनाउने त्यो बूढो मान्छे साँच्चिकै एउटा दमदार मान्छे हो । प्रकाशित : वैशाख २८, २०७६ १०:२२
पारियात्र र महामेरु
बंगालका राधानाथ सिकदरले 'माउन्ट फिफ्टिन’ भनेर जर्ज एभरेस्टभन्दा अघि नै तोकेका विश्वको सर्वोच्च पहाडलाई कृष्ण द्वैपायन व्यासले महाभारत लेख्दा नै पहिल्याइसकेका थिए
वैशाख २८, २०७६ सौरभ
स्थानविशेष हो पारियात्र । कहाँ पर्छ ? माथिको चर्चा हो यो । सुरु गरौं यसरी– गण्डकीमाथिका दुई प्रचलित पुस्तकहरू हातमा आइपुगे । तर तिनमा गण्डकी नदीको नाम–परिचयमाथि समेत ध्यान गएको लागेन । यसैले पहिला गण्डकीको नामसूची दिइन्छ ।
कोण्डोसटेस : यस्तो नाम दिएका हुन् गण्डकीलाई ग्रीक मूलका एरियनले, इस्वीको दोस्रो शताब्दीमा । जति बेला उनी उत्तर भारतमा मेसेडोनियनहरूका राजदूत थिए । यो अनौठो सुनिए पनि गण्डकीकै रूपान्तरण हो ।
चक्रनदी : गण्डकीलाई यो नाम दिने भागवत्को पाँचौं स्कन्ध हो । भागवत् २५ सय वर्षअघि लेखिएको मानिन्छ ।
गण्डकी : यो नाम महाभारतका धेरै ठाउँमा आउँछ । आदिपर्व, सभापर्व, वनपर्व आदि । गण्डकीको उल्लेख गर्ने महाभारत लेखिएको समय इसापूर्व ६०० लाई मानिएको छ । तर गण्ड ऋषिबाट गण्डकी बनेको जानकारी दिने सुरुमा हिमवत् खण्ड हो । त्यसलाई अरूले पछ्याएका छन् ।
गण्डसह्वाया : यो नाम गण्डकीकै निम्ति हो भन्ने भारतीय विज्ञहरूको ठहर छ । महाभारतको वनपर्वमा यो नाम आउँछ । उक्त विचार पीबी काणेको हो । शिवराम आप्टेले पनि सोही जनाएका छन् ।
चिगचौडी : अघि यहाँ मगर भाषाको प्रभाव हुँदा कालीगण्डकीलाई चिगचौडी भन्दथे । (पृ. ४४ कालीको छाल– कालीभक्त पन्त)
गल्लिका : यो नाम पद्म पुराणमा आउँछ । भारतीयहरूले गल्लिकालाई गण्डकी नै मानेका छन् । पद्म पुराण २४ सय वर्षअघि लेखिएको मानिन्छ ।
तमसा : कालो भन्नाले तमस अर्थात् कालीगण्डकीकै नाम तमसा हो भन्ने बुझिन्छ । जसको किनारमा चित्रवन अर्थात् चितवन र वाल्मीकि आश्रम छ पनि । यद्यपि अहिले एउटा सानो नदीलाई मात्र तमसा भन्ने चलन छ ।
सदानीरा : यो नाम सतपथ ब्राह्मणमा सर्वप्रथम उल्लेखित छ गण्डकीका निम्ति । संस्कृत अर्थ हो, सधैं पानीले भरिभराउ हुने । तर लाटो अर्थमा सदासर्वदा नीलो देखिन्छ । किनभने यसमा पोखरीमा जस्तो काई र लेउ बन्नै पाउँदैन । यसैले मगर भाषाको हरियोबोधक गन शब्दमा खोलाबोधक डी मिलेर गण्डकी बनेको हो भन्ने निर्क्योल (गुरुङ, २०६१) सही लाग्दैन ।
शालग्रामी : यस शब्दको स्रोत बराह पुराणमा आधारित छ । त्यो भनाइ हो, जसमा विष्णुले शालिग्रामलाई ग्रामप्रस्तरको रूपमा तिमीमा सधैं रहन्छु भनी वरदान दिए ।
गण्डिका : अपर गण्डिका र अपूर्व गण्डिका ब्रह्माण्ड पुराणले पनि नाम लिएको छ । माल्यवान पर्वतको पूर्वी शिखरबाट पूर्व गण्डिकाको प्रादुर्भाव भएको छ भनेर अर्को पुराणले भनेको छ । त्यहाँ अपर गण्डिकाको उल्लेख पनि छ । रूखकटहर र काली आँपको उल्लेख पनि भएको छ । काली आँपलाई नेपालको रैथाने भन्ने चलन छ । यद्यपि रूखकटहर भने मलेसियाको रैथाने मानिन्छ ।
वेणु : गंगामाथि अन्य पवित्र नदीका साथ त्रिपुरारीका रथमा गण्डकी वेणु नामले रहे । यसरी गण्डकीले वेणु नाम पाएको छ मत्स्य पुराणबाट ।
चक्षु : हिमालयको एक नदीको नाम हो ब्रह्माण्ड पुराणले भन्यो । आँखाजस्तो देखिने शालिग्राम चक्रबाट यस्तो नाम बनेको बुझिन्छ । नील पर्वतको दक्षिणतिर बग्दै पश्चिम लाग्ने नदीलाई चक्षु नाम दिएको छ । अर्को पुराणले । जोमसोमको पूर्वपट्टिको भागलाई नीलपर्वत नै भनिन्छ । पारट र खस देश भएर बग्छ भनेपछि चक्षु कुन नदी हो भन्ने अरू टड्कारो छ । चक्षु नदी सुरुमा रामायणमा आउँछ ।
बस्वोकसारा : महाभारतका सप्तसिन्धु अर्थात् गंगा, यमुना, प्लक्षगा, रथस्था, सरयु, गोमती र गण्डक वा बस्वोकसारा भनी यसरी गण्डकीले नयाँ नाम पाएको छ । यो नाम भारतीयहरूले दिएका हुन् ।
लमजुङको याङ्जाकोट नजिकैको बाक्स्वारासँग यो मिल्न गएको छ । स्वाराको अर्थ पाखो जमिन खारेर बनाइएको कान्ला हो । तर बाक्स्वारामा परेको स्वारा अब त्यस्तो देखिएन ।
सप्तधारा : कोसी र गण्डकीको नाम पहिले सप्तधारा थियो (पेज १२, नेपाल र नेपाली– गोविन्दप्रसाद भट्टराई)
नगमालिका : १६–१७ सय वर्षअघि पनि गण्डकी नगमालिका भनिन्थ्यो । यसो भनेका छन् योगी नरहरिनाथले ‘हाम्रो मौलिकता’ भन्ने पुस्तिकाको पेज १९ मा ।
ठ्याक्कै चौथो शताब्दीमा कालिदासले लेखेका छन् :
हिमालयो नामः नगाधिराज ।
सम्भवतः यही देखेर योगीले त्यसो भनेका हुन् । नगको अर्थ पहाड हो ।
तर गण्डशैल शोभा अर्थात् गण्डकी किनारका पहाड लेखेका छन्, केशरबहादुर केसीले उनको पुस्तक ‘द जुडिसियल कस्टम्स अफ नेपाल’ को भूमिकाको पृष्ठ ७ मा ।
हिरण्यवती : ‘साकर्ड बुक अफ द इस्ट’ सम्पादन गर्दा पेज ८५ र पेज ४५३ मा म्याक्समुलरले उल्लेख गरेका हिरण्यवती गण्डकीका निम्ति हो भन्ने ठनाइ भारतीयहरूको छ ।
एक लेखकको लेखाइ छ— गण्डकी प्रसवण क्षेत्रका घाट र टारहरूमा बोटे, दरै र कुमालहरूको बसोबास पाइन्छ । घाटमा डुंगा चलाएर जीविका निर्वाह गर्नेलाई पानीबोटे र नदीको बालुवा चालेर सुन निकाल्नेलाई सुनाबोटे भनिन्छ (पेज ३०, गुरुङ २०६१) यसैले हिरण्यवतीबारेको मन्तव्य सही नै देखिन्छ ।
यमुना : घाटु नृत्य नाटिकामा सप्तगण्डकीलाई सात यमुना भनेको छ । –पेज १८४, गुरुङ २०६१) यसबाट गण्डकीको एक अर्को नाम थाहा हुन्छ ।
‘वारि जमुना पारि जमुना’ भन्ने एक गुरुङकै लोकगीतले जगमान गुरुङको लेखोटलाई समर्थन गरेको छ । त्यति मात्रै होइन, तनहुँको याम्पाफाँट नामले यो फाँटको प्राचीन स्थिति, नृवंशशास्त्रीय खोजको एउटा बलियो केन्द्र हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि देखाएको छ । सम्भवतः नेपालको एउटा प्राचीन नाम यम्बु भएबाट गण्डकीको प्राचीन नाम पनि यमुना थियो, जसलाई कालान्तरमा वेदले नै र त्यसपछि भारतीयहरूले कथित गंगाको सहायक बनाइदिए भन्ने देखिन्छ ।
आज पारिपट्टि कथित यमुना नदीको किनारमा ताजमहल छ र गोमतीको किनारमा लखनऊ छ । त्यो देखिरहेकाहरूलाई भन्न खोजेको कुरा मान्न गाह्रै हुन्छ । पंक्तिकारको आशय वागलुङ जिल्लाको ३१६१ मिटर अग्लाइको घुम्ती पहाडको कुनै खोलालाई गोमती बनाइयो भन्ने हो । वाल्टर हेमिल्टनले पनि ऋग्वेदको गोमतीको कुरालाई छाडेर पौराणिक गोमती घुम्तीबाटै बन्न पुगेको संकेत गरेका छन् ।
च्युमिङग्यात्सा : यो नाम तिब्बती बौद्धमार्गीहरूले गण्डकीलाई दिएका हुन् । अर्थ हो– सय खोला । तर खासमा यो नाम मुक्तिनाथका १०८ धाराका निम्ति हो । अर्थ हो— सय मूल । जहाँको पानी गण्डकीमा आइपुग्छ । ह्युबर्ट डिक्लियरको ‘अतिसाको नेपाल आगमन’ भन्ने लेखोटमा जाने हो भने यो नाम एघारौं शताब्दीमै थियो ।
नारायणी : हामीले मानेको गण्डकीको पुछार भागलाई मात्र नारायणी भनिन्छ सीमावारि । तर अहिले भारतीयहरू उनीहरूमा बग्नेलाई गण्डक र हाम्रोमा बग्नेलाई नारायणी ठान्दछन्, सीमामा गण्डक परियोजना रहे पनि ।
काली गंगा : यस्तो नाम दिएका छन् गण्डकीलाई मुरलिधर भट्टराईले ‘नेपाल द बर्थ प्लेस अफ कालिदास’ भन्ने उनको पुस्तिकाको पेज २० मा । भट्टराई राहुल सांकृत्यायनलाई शास्त्रार्थका निम्ति चुनौती दिने पात्रका रूपमा आज पनि सम्झिइन्छन् ।
कैलाशलाई भनिन्छ गांगरी । यसैबाट बगेर आउने नदी कर्णालीलाई पश्चिम नेपालका मगरहरूले भन्छन्, घोङ्गजु । पानीको फोकाबोधक संस्कृत शब्द गण्डसमेत यसैबाट बनेको देखिन्छ, यद्यपि गण्डका अरू धेरै अर्थ छन् । यही गाङमा खोलाबोधक दी जोडिएर गण्ड र फेरि पानीबोधक क्यु मिलेर गण्डकी अर्थात् ‘पानी, पानी र पानी’ हुन पुगेको छ बाइरोडको बाटो भनेजस्तो ।
एतरेय ब्राह्मण (४००० इसापूर्व) को सदानीरा अब महाभारतकाल (इसापूर्व ६००) मा आइपुग्दा गण्डकी भन्ने नयाँ नामले न्वारन भयो । यसर्थ भट्टराईले काली गंगा लेख्नु गलत छैन ।
गंगा शब्द गण्डकीका निम्ति धर्मराज थापाले पनि धेरै ठाउँमा प्रयोग गरेका छन् तर गलत छैनन् । किनभने कृष्णाभा (कालीगण्डकी) को जलदेवी गंगा हुन्, हिमवत् खण्डले भनेपछि पूरै गण्डकीको नाम गंगा भयो नै ।
सरयु : यस्तो नाम पनि दिएका छन् गण्डकीका निम्ति भट्टराईले पेज ३७ मा । कुण्ड, पोखरी, ताललाई संस्कृतमा भनिन्छ सर । दामोदर कुण्ड अर्थात् कालीगण्डकीको मुहान भयो सर । त्यही सरबाट बगेर आएकाले भयो सरयु, यसैबाट अर्को नाम बन्छ सरस्वती । सरस्वतीको अर्को नाम पारावतघ्नि अर्थात् पर्वतलाई खियाएर, चिरेर, घात गरेर बग्ने नदी भएपछि त्यो मैदानी नदी हुने कुरा पनि भएन ।
भारतीय लेखकहरूले सीमापारि पुगेपछि कर्णालीको तल्लो भागलाई पनि सरयु भनेर लेखेका छन्, सम्भवतः मानसरोवरबाट आउने भएकाले । संस्कृतका विज्ञ अंग्रेजहरूले सरस्वती शब्द जुनसुकै नदीलाई पनि लाग्छ भनेर लेखेका छन् । यसैले भारतको राजपूतानाको सरस्वती र रामायणका सरयु अरू उस्तै नाम गरेका नदी हुन् भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ ।
देविका नदी म्याग्दी जिल्लामा बग्ने सानो खोला हो (पेज ४५०, मुस्ताङ दिग्दर्शन– क्षत्री) । ब्रह्माण्ड पुराण (इस्वीको चौथो शताब्दी) अनुसार देविका गण्डकीमा मिल्दछ पनि । त्योभन्दा धेरै पछिको कालिका पुराणले देविकालाई सरयुको सहायक भनेपछि भट्टराई फेरि पनि गलत छैनन् ।
ओम्दोक्यु : माइकल भिन्डिगले कालीगण्डकीका निम्ति यो नाम उल्लेख गरेका छन् ‘द थकाली ः अ हिमालयन एथ्नोग्राफी’ को पेज ४३८ मा ।
गण्डकवती : यो नाम गण्डकीलाई भारतीय संस्कृतज्ञ वामन शिवराम आप्टेले दिएका हुन् ।
रडी : रडीको अर्थ हो चिप्लनु । यो शब्द ‘इतिहास प्रकाशमा सन्धिपत्रसंग्रह’ मा योगी नरहरिनाथले उल्लेख गरेका छन् । रडिखेल्ला भन्ने ठाउँ नै छ जुम्ला खलंगाबाट एक घण्टा पर । यसको ठेट अंग्रेजी अनुवाद हो— स्किइङ स्पट । यद्यपि स्किइङ नेपालमा सन् १९७० मा जापानीहरूले पहिलोपल्ट खुम्बु हिमनदीमा सुरु गरेको कुरा ‘भिनेटस अफ नेपाल’ मा हर्क गुरुङले दिएका छन् (पेज ३१६) ।
आज जुन नदीहरूको संगमको रूपमा रिडी छ त्यो रडीको रूपान्तरण त देखिन्छ नै, साठी किलोमिटर लामो भएपछि यो संस्कृत शब्द अपगा अर्थात् गोडा नभएको भन्नाले रड्किनु शब्दको समानान्तर भयो । रिडी ठेट नेपाली शब्द हो ।
लदी : लदी पूजा माझीहरूको सबैभन्दा ठूलो पूजा वा चाड हो, थारूहरूको माघी भनेजस्तै । यो पूजा कोसी र त्यसका सहायक नदीहरूको पूजा हो । अर्थात् लदी कोसीकै अर्को नाम हो ।
तर लदी खोला छ गोरखामा १५ किलोमिटर लामो र अर्को लदी खोला छ तनहुँमा चुँदी नदीको सहायकको रूपमा । नभन्दै यो वाक्य उपलब्ध छ– माझीको पुर्ख्यौली थलोबारेको अर्को भनाइअनुसार कालीगण्डकी र नारायणी नदी किनारमा पनि प्राचीनकालदेखि उनीहरू बस्दै आएका हुन् (पेज १३, माझी जातिको चिनारी– घर्तीमगर र माझी) । यसले लदी नाम गण्डकी र त्यसका सहायकहरूका निम्ति हुनुपर्नेमा बसाइँ सरेर जाँदा कोसीका निम्ति बन्न पुगेको देखिन्छ ।
पारियात्र पर्वत हिन्दकुश पर्वतको अर्को नाम हो भनेर एस.एम. अलीले ‘पौराणिक जोग्राफी अफ इन्डिया’ मा लेखेका छन् । हिन्दकुश मध्यअफगानिस्तानदेखि उत्तरी पाकिस्तानसम्म विस्तारित छ ।
पारियात्र इन्डियास्थित बिन्ध्य पर्वतको उत्तर–पश्चिमी भागलाई मानिन्छ (नेट.) पारियात्र नर्मदावरिपरिका शृंखलाहरू हुन् । यो चम्बल नदी र बेत्वा नदीको स्रोत हो । अझ भन्नुपर्दा पश्चिम बिन्ध्य हो । (पेज २९३, वायु पुराणको अंग्रेजी अनुवादमा जी.पी. भट्ट, युनेस्को) यद्यपि यस धारणाको सर्वप्रथम उत्पादनकर्ता संस्कृतविज्ञ पश्चिमा ब्युहलर देखिन्छन् । यस धारणामा शतप्रतिशत विज्ञहरू सहमत छन् । उनीहरूका भनाइमा पारियात्र गंगा र यमुनाबीचको भाग हो ।
इसापूर्व चौथो शताब्दीको मानिएको ब्रह्माण्ड पुराणले पारियात्रबाट बग्ने नदीहरू भनेर दिइएका ११ नाम यी हुन्— कर्णासा, नन्दना, सदानीरा, महानदी, पारा, चर्मण्वती, नुपा, विदिशा, वेत्रवती, सिप्रा, अवन्ती । सदानीरा गण्डकीको अर्को नाम हो भनेर माथि लेखिसकियो । पाराका बारे तल छुट्टै उपशीर्षक छ । चर्मण्वती आजको चरौंदी हो ।
हिजोको मनाङ भोटस्थित लार्के भन्ज्याङबाट बुढीगण्डकी निस्कन्छ, १ सय ४३ किलोमिटरको लक्ष्य राखेर । बोदबाट भोट हुने हो । यसर्थ विदिशा आजको बुढीगण्डकी नै देखिन्छ । वेत्रावती त्रिशूली नदी प्रणालीमा पर्छ । सिप्रा नदीको किनारमा सीमापारिको उज्ज्यनीनगर छ भन्ने आजको मान्यता हो । तर यो गोरखा–लमजुङको ४६ किलोमिटर लामो चेपे नदीको नाम देखिन्छ । यद्यपि हाम्रा संस्कृतज्ञहरू च्यवन ऋषिसँग त्यसलाई जोडेर थाक्दैनन् । गण्डकी नदी प्रणालीमा नपरे पनि सुनकोसीमा नपु घाट छ ।
सोही समयको मानिने वायु पुराणले भने सतीरा थपेकोमा त्यो सदानीरा हुनुपर्छ भनेका छन् भट्टले । ११ का ठाउँमा १४ नदी बनाउँदा वेदस्मृति, वृतघ्नी आदि थपिएको छ । वेत्रवती, वेदवती, महानदी महती र कर्णासा वर्णासा भएको छ । तर वृतघ्नी गुल्मीको चार किलोमिटर लामो बेतिनी र वेदस्मृति गुल्मीकै ६ किलोमिटर लामो बेदिनी देखापर्छ ।
इसाको तेस्रो शताब्दीको मानिने मार्कण्डेय पुराणले १३ वटाको मात्रै नाम लिएको छ । महानदी अब मही र कर्णासा अब वेणा भएको छ । गण्डकीको अर्को नाम वेणु हो माथि लेखिसकियो । त्यसको एक शताब्दीपछि लेखिएको मानिने मत्स्य पुराणले १५ वटा नाम दिएको छ । तर अब महानदीलाई महती नै लेखे पनि कर्णासा पर्णासा भएको छ । वेत्रवती वेणुमती भएको छ ।
धवन्तीरुपा र कुन्ती नाम थपिएका छन् । महानदी वा महती आजको मादी लाग्छ, दी मगरहरूको खोलाबोधक भए पनि । नभन्दै मदी लेखेका छन् डी.सी. सरकारले त्यसलाई (पेज ५३ स्टडिज अन द ज्योग्राफी अफ एन्सियन्ट एन्ड मिडिभल इन्डिया) । स्याङ्जाको ६२ किलोमिटर लामो आँधिखोला अब अवन्ती हुन पुगेको हुनुपर्छ भन्दा पाठकहरूलाई हास्यास्पद लाग्नेछ । तर स्थानीय नामहरूको संस्कृतकरण गर्नु पौराणिक समस्या नै हो ।
अब जाऊँ जरोतिर । पारियात्र पहिलो पटक पारिपात्र नामले इसापूर्व छैटौं शताब्दीको मानिने तर पी.बी. वार्ताकले इसापूर्व ५५६१ मा घटेको घटना भनेको महाभारतमा आएको छ । यसले वनपर्वमा भनेको छ— महामेरुको पश्चिम छेउमा पर्दछ ।
पौराणिक सुमेरुलाई महामेरु मान्न पुग्दा एस.एम. अलीले पारियात्रलाई अफगानिस्तानमा धकेल्न पुगेको अब स्पष्टै छ । महामेरु भनेको आजको महालंगुर अथात् हिमालयको उत्तरपूर्व भाग जसमा सगरमाथा, लोहोत्से, मकालु र चो ओयु पर्ने इलाकालाई हेरेपछि पारियात्र टड्कारो हुन्छ । महाअलंघ्य अर्थात् पार गर्न नसकिने, पुग्न नसकिने भन्ने नाम महालंगुर हुन पुगेको छ ।
अर्थात् बंगालका राधानाथ सिकदरले ‘माउन्ट फिफ्टिन’ भनेर जर्ज एभरेस्टभन्दा अघि नै तोकेका विश्वको सर्वोच्च पहाडलाई कृष्ण द्वैपायन व्यासले महाभारत लेख्दा नै पहिल्याइसकेका थिए ।
रामायणको बालकाण्ड लेखिने बित्तिकै पश्चिमाहरूले समेत पढिसकेको प्रमाण पाइएको छ भने २९ हजार २९ फिट अग्लो पहाडलाई बिर्सेर २४६७ फिट मात्र अग्लाइको ठुटे ढिस्को बिन्ध्य पर्वतलाई त्यही कालमै कसैले पनि महामेरु लेख्ने कुरै आउँदैन ।
बिन्ध्य र पारियात्र भनेर ब्रह्माण्ड, वायु र मत्स्य तीनवटैले शृंखला नै भिन्न गरिसकेपछि, हरिवंशसमेतले हिमवान मेरु र हिमवान पारियात्र लेखिसकेपछि, हरिवंशमै पारियात्रमा बग्ने गंगालाई ‘अबिन्ध्या’ भनिन्छ उल्लेख आइसकेपछि अरू थपिरहनु परेन ।
राय चौधरीले खासगरी ऋग्वेदका नदीहरू अघि सारेका छन्, जसमा त्यो समयका ९९ नदी पर्छन् । महाभारतमा ६७ नदीको नाम आउँछ, हरिवंश पुराणमा ६१ र मार्कण्डेय पुराणमा ९० नाम आउँछ । मेगास्थनिजले करिब ३६ नदीका बारे लेखेका छन् । र टोलेमीलाई ४४ नदीको नाम थाहा थियो— एक जनाले लेखेका छन् (पेज १२८, प्रफेसर एच.सी. राय चौधरी एज अ हिस्टरियन– हरिहर पाण्डा) तर गण्डकी प्रसवण क्षेत्रका नदीनाला, खोल्साखोल्सी सर्सर्ती पंक्तिकारले गन्दा पनि ४ सय २२ पुगेको छ ।
हजार पच्चीस हिमनदी र ३ सय ३८ ताल छन् भनेर त नेटले नै दिएको छ । भन्नाले पुराणहरूले कैयौं नामको हिज्जे आफूखुसी हालेको देखिन्छ । इसापूर्व पाँचौं शताब्दीको मानिने भागवत्को पाँचौं स्कन्धमा शालग्राम क्षेत्र (दामोदरकुण्ड) मा सिंह भएको कुरा आउँछ । सो ठाउँमा पुग्दै नपुगी पहिलेका रचयिताहरू कल्पनाका भरमा लेखिदिन्थे भन्ने कुराको यसरी पुष्टि हुन्छ ।
भारतको कथित गंगाकै १५ वटा नाम पाइँदैन भने साह्रै पुरानो र महत्वपूर्ण नमानी गण्डकीका त्यति धेरै नामहरू बन्दैनन् । अर्थात् उतिबेला तोकिएको पारियात्रलाई पछिल्ला पुराण रचयिताहरूले मध्यभारतको उत्तर पश्चिमी बिन्ध्यतर्फ सारे ।
पारियात्रको नदी सञ्जालको मन्त्र नै बिर्सेर वेदवतीलाई अब आर्यवर्तबाट उति पर मैसुरमा देखाउने पनि छन् । यसरी वेदवती नै सरेको छ । मार्कण्डेयले त अलखनन्दा बगेर गएर मानसरोवर भरिएको समेत कुरा गर्छ । भूगोल यसरी खजमजिएको छ । पारियात्र मानौं तैरिरहेको जमिन ठानिन्छ भने अनौठो के भयो ?
पार खोलाहरू हुन् गण्डकी प्रदेशका । एउटा पार खोला तीन किलोमिटर लामो छ । यो म्याग्दीमा २८.३२ अक्षांश र ८३.४४ देशान्तरमा पर्दछ । अर्को पार खोला कास्कीमा पर्दछ । सात किलोमिटर लामो छ र २८.१२ अक्षांश एवं ८४.५८ देशान्तरमा पर्दछ । पूर्वकालमा यिनको लम्बाइ, बेसिन र कमान्ड एरिया कस्तो थियो ? भन्नेबारे सेडिमेन्टलजिस्टहरूले भन्न सक्लान् । त्रिविको भूगर्भ विभागसँग टेत्सुई साकाई र हिडेओ टाबाटासँग मिलेर काम गरेको लामो अनुभव पनि छ ।
तर के निश्चित छ भने आजको पर्वत जिल्ला यिनै २ खोलाका बीचमा पर्दछ । यसैले पार्वत गुरुङ शुद्ध नाम भयो, पार्वती म्याग्दीको पाङगाउँमा जन्मेकी हुन् (श्रेष्ठ) भन्ने कुरा लोकोक्ति भए पनि यो नाम बनोट त्यसै जन्मिएको होइन भन्ने स्पष्ट छ । थप कुरा, मूल पारकोट आजको पर्वत नै देखिन्छ ।
(यसर्थ इसापूर्व पाँचौं शताब्दीको विष्णु पुराणको एक पात्र पारको नाम टिपेर १८औं शताब्दीमा मात्रै काशीराम काश्यपले लेखेको गण्डकी महात्म्यको भनाइ उतार्दै ‘पार नामका राजाले शासन गर्दा बनाएको कोट–किल्लाको कारण त्रिशूली र कालीगण्डकीबीचको क्षेत्र पारकोट कहलाएको थियो ।’ (नेपाल निरुक्त–ज्ञानमणि नेपाल) भन्ने तर्क सही लाग्दैन ।)
पारको एउटा अर्थ नदीको पल्लो किनार पनि हो । तर नजिकैको लमजुङलाई नेपालमै पारा (माइका, अरेबिक शब्द अभ्रख) को ठूलो भण्डार भूगर्भविद्हरूले मानेबाट यी खोलाहरूको पिँधमा टल्कने पाराबाट पार भएको बुझिन्छ । पारदर्शी शब्द यही पाराबाट आउने हो । नेवारहरूले सिठीनखमा इनार सफा गरेपछि पिँधमा पाराको ढिक्का राख्ने कारण नै पानी पारदर्शी रहुन्जेल इनार फोहोर भएको छैन भनेर बुझ्नलाई हो ।
किनभने यही अर्को पारियात्र, पारावत हुँदै आज पर्वत र पारकोट हुन पुगेको स्पष्टै देखिन्छ । कालीगण्डकी र त्रिशूलीबीचको भूभागलाई आज पनि पारकोटटार भनिन्छ (पेज १०६, नेपालको राष्ट्रिय समीकरणको परिप्रेक्ष्यमा गण्डकी प्रसवण क्षेत्रका तीर्थस्थलहरूको विश्लेषणात्मक अध्ययन– गुरुङ २०६१) ।
पारोको अर्को नाम मकर, यसैबाट मर्करी भएकाले पाराको नाम पनि माइका हुन पुगेको छ । किनभने दुइटैले उस्तै चहक दिन्छन् तर पारोलाई परम्पराले शिवको शुक्रकीट मान्दछ । यसैबाट स्पष्ट हुन्छ किन पारखोला बग्ने म्याग्दीको पाङलाई पार्वतीको जन्मस्थल भनियो ?
सुरुमा अवशेष खाने काग (कर्भस कर्‍याक्स) र त्यसपछि फेला परेको शालिग्राम (एमोनाइट) बीचको द्वन्द्वमा गण्डकी प्रदेशका जुन सांस्कृतिक रूपान्तरणहरू भए त्यो फुकाउनु सजिलो छैन ।
अझ दामोदरकुण्डमा शालिग्राम फेला नपरेको भए, गण्डकी क्षेत्रको आधुनिक, सांस्कृतिक स्वरूप अर्कै हुने थियो । त्यो आजकोबाट धेरै भिन्न हुन्थ्यो । वाल्टर हेमिल्टनले सन् १८२८ अर्थात् करिब २०० वर्षअघि नै भनिसकेका हुन्— गण्डकी उपत्यकाको अन्वेषण नहुनु दुःखको कुरा हो (इस्ट इन्डिया गजेटियर) ।
पैसा छाप्ने यन्त्र बनाउने कुराको पहिलो सर्त यता नेपालपट्टिबाटै वाल्मीकि आश्रमसम्म पुग्ने पुल हो । यताबाट मानिसहरू पुर्‍याउन होइन, उताबाट भित्र्याउन । जबसम्म बन्दैन कुनै स्थानीय नेताले, कुनै पर्यटन अभियानकर्ताले गण्डकीको विकासको कुरा नगरेकै राम्रो । हिमालयभन्दा पुरानो मानेको छ, गण्डकी नदीलाई विज्ञानले भने त्यसलाई नचिन्नेले थप कुरा नगरेकै बेस ।
प्रकाशित : वैशाख २८, २०७६ १२:१४
भिल्लको देशमा मिल्किन्छन् रत्‍न
प्रेम वर्जित, हत्याचाहिँ जायज ?
हामी मान्छे कहिले बन्ने ?
संस्कृत भाषाले उब्जाएका प्रश्नहरू
असहिष्णु मिडियाका विपक्षमा
प्रकृतिमाथि मानवको विजय
अपडेटः शनिबार, २४ जेठ, २०७७ । २० : १२ बजे